Ireo ny antsipirian'ny resadresaka nifanaovan'i Eddy Cue tamin'ny fihaonambe SXSW | Avy amin'ny mac aho
Herinandro lasa izay dia nanambara tamin'ity pejy ity izahay resadresaka izay homen'i Eddy Cue amin'ny SXSW Audiovisual Content Conference, izany no ankalazaina ankehitriny. Eddy Cue no lohan'ny atiny iTunes ao amin'ny Apple ary noho izany dia vahiny malaza amin'ity fihaonambe ity.
Niara-nipetraka tamin'i Dylan Byers, mpanao gazety CNN, i Cue hiresaka momba ny haino aman-jery samihafa, fialam-boly amin'ny fomba fijerin'i Apple ary topimaso momba izany. Ora maro talohan'ny nahalalantsika ny Nahazo Apple ny serivisy fisoratana anarana Magazine Texture, izay hampidirina ao amin'ny Apple News.
Manaparitaka vaovao, Eddy Cue dia niresaka momba ny atiny Apple. Nampahafantarina izany ny orinasa dia vonona tanteraka ary vonona hanolotra atiny am-boalohany, amin'ny fomba fanaon'ireo sisa orinasa audiovisual. Na izany aza, lNy filazan'ny orinasa dia tsy fahazoana orinasa toa ny Netflix na Disney. Ny kalitao no tokony hifantohana fa tsy ny habetsahana. Apple dia tokony hifantoka amin'ny "tantara mahafinaritra iray." Nandritra ny resadresaka nifanaovana taminy dia nanesoeso ny teknolojia izay tsy inona akory fa "gaga" ho an'ireo mpampiasa.
Ny asa vita nandritra ny roa taona mahery, miaraka amin'ny fandraisana mpiasa mpitantana avy amin'ny Sony, toa an'i Zack Van Amburg sy Jamie Erlicht, dia manomboka mandaitra. Ny tanjon'ny karamao dia ny manakarama olona "nahalala ilay orinasa, nefa vonona hieritreritra hafa". Ireo tompon'andraikitra Apple roa dia nanao fifanarahana mihidy miaraka amin'ny fandaharana amin'ny fahitalavitra mihoatra ny 10, miaraka amin'ireo mpisehatra, mpamokatra ary mpitantana mifandraika amin'izany. Ny ekipa dia voaforona olona 40 mahery nokaramaina tao anatin'ny roa taona lasa.
Ho an'i Apple, ity lalam-pihariana vaovao ity dia manery azy hanao fividianana vola be. Araka ny voalazan'i Cue:
Manao fampiasam-bola lehibe izahay, na dia tsy olana aza ny vola.
Etsy ankilany, Eddy Cue dia nanontaniana momba ny tanjaky Apple ao amin'ny faritra fanatanjahan-tena. Midika izany fa ny fanaraha-maso ny hetsika ara-panatanjahantena dia mitondra fiaraha-miasa lehibe kokoa. Ireo mpampiasa dia hahazo fampandrenesana momba ny statistikan'ny lalao sy ny fampahalalana mifandraika na mahaliana amin'izao fotoana izao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Ireo ny antsipirian'ny resadresaka nataon'i Eddy Cue nandritra ny fihaonambe SXSW